1978 ayaa aasaasay
Carl Henry Consultancy - Hordhac
Ka dib markii 40 lagu daray sanado iyo 39 warshado kala duwan ayaan ka soo horjeeday dhibaatooyinka ganacsiga badankood oo wax ka bartay wax kasta oo ka mid ah hawlaha ganacsiga labadaba UK iyo adduunka oo dhan.
Waxaan ogaaday in aan ku dari karno qiimaha tooska ah ee tooska ah adoo xalinaya dhibaatooyinka igu keena 'xaalado isdabajoog' ah iyo xaalado gurmad.
Mid ka mid ah meelihii hawlgalka, tan iyo markii 1980 uu ahaa hantida maguurtada ah - halka degaanku uu ahaa midka ugu horreeya ee aan si guul leh u dhameystiray macaamilada qaybaha oo dhan oo ay ka mid yihiin Waqtiyada firaaqada, madadaalada, Xafiiska, Dukaamada iyo ganacsiga. Sidoo kale waa inaan u hogaansamaa dhammaan farsamooyinka ganacsiga, horumarinta, dib u habeynta, maamulka iyo maalgashiga.
Waxaan sidoo kale ka dhigay hadafkeyga inaan ka hor tago dhammaan tiknoolajiyadii ugu dambeeyey, sidaas darteed waxaan bilaabay shabakadeyda koowaad ee eCommerce ee 1998.- ilaa maanta shirkadahayga iyo waxaan si wanaagsan u dhisay websaydhada 5,000 ee dhammaan noocyada dhabta ah laakiin dhab ahaantii waan lumay tirinta !
Waxaan xiiseynayaa in aan ka doodo fursadaha nooc kasta ah gaar ahaan haddii ay jiraan caqabado ka baxsan ama haddii mashruucu yahay mid adag ama weyn, fadlan ila soo xiriir Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view. si aad u sameyso wicitaan ama kulan.
MSA - 41A jidka loo yaqaan Jeunes